I-Telegram ihlaziywa ngokusungula iiNdwendwe eziKhawulezayo kunye neqonga layo lokubloga | Iindaba zeGajethi
I-Telegram ihlaziywa ngokusungula iiNdwendwe eziKhawulezayo kunye neqonga layo lokubloga
Ngokungafaniyo nezinye izicelo zokuthumela imiyalezo kwangoko kwezininzi ezikhoyo kwintengiso, yocingo Ayikayeki ukuhlaziya kunye nokudibanisa amanqaku amatsha ukusukela kanye ngala mhla yenze amatyala ayo, ngononophelo olukhulu, kwintengiso. Ukusukela ngoko iyakhula ngaphandle kokuma kwaye namhlanje baninzi kuthi abayibona ukuba iyodlula kude i-WhatsApp.
Kwakhona Izolo ndifumene uhlaziyo olutsha, ngoku olufumanekayo lokukhuphela kuzo zombini iGoogle Play kunye neVenkile ye App, Kwaye ifika ilayishwe ziimpucuko kunye neendaba ezisikhokelela ekubeni sicinge ngeTelegram enamandla ngakumbi, eya kuthi isinike imisebenzi emitsha nenomdla.
1 Iindaba zenguqulo entsha yeTelegram
2 Ukujonga kwangoko okanye ukuJongwa ngokukhawuleza
3 Iqonga lendalo leTelegram
4 Khuphela uhlaziyo ngoku
Iindaba zenguqulo entsha yeTelegram
Ngaphambi kokungena kuyo nayiphi na indlela iindaba esiza kuzifumana kuhlobo olutsha lweTelegramMasenze uphononongo olukhawulezileyo lwabo bonke;
Ukujonga ngokukhawuleza amanqaku avela kuPhakathi nakwezinye iisayithi
"Amaqela ngokufanayo" kwiinkangeleko
"Yiya kumhla" ekukhangekeni komyalezo
"Jonga ipakethe" yezitikha zamva nje
Ngokusebenzisa ikhowudi yokufikelela ufihla izingxoxo zakho kwimisebenzi emininzi
Ukuphuculwa kwekhamera kunye nevidiyo
Ukunikezelwa kwetelegra.ph, iqonga elitsha lokushicilela elichazwe njengecocekileyo, elilula nelisebenzayo
Ukujonga kwangoko okanye ukuJongwa ngokukhawuleza
Las Ukujonga ngokukhawuleza Yenye yeencwadana ezimbini ezintle apho iTelegram isinika ukufikelela kunye nohlaziyo olutsha. Enkosi kuye, ngalo lonke ixesha umnxeba esabelana ngekhonkco kunye nathi, kuya kuvela iqhosha "lokujonga ngokukhawuleza" apho sinokubona umbono wephepha. Nje ukuba sicinezele eli qhosha, iphepha liya kugcinwa kwimemori ye-cache yeTelegram, kwaye elo phepha linokufundwa ngaphandle kweintanethi Ngalo naliphi na ixesha kunye nendawo kwaye nangona singenawo unxibelelwano kwinethiwekhi yenethiwekhi.
Besele silubonile olu khetho lutsha lwesicelo sokuthumela imiyalezo kwezinye ii-aplikeshini, kodwa akukho meko apho unokukhetha khona ukufunda okanye ukujonga amaphepha ngaphandle kweintanethi.
Iqonga lendalo leTelegram
Inqaku lesibini elihle esinokulonwabela liqonga lendalo leTelegram. Ukuqala ukuyisebenzisa ngekhe sidinge nomsebenzisi, okanye nakuphi na ukubhaliswa kwaye kuya kwanela ukufikelela telegra.ph Apho siza kubona into efana naleyo unokuyibona kumfanekiso esikubonisa wona ngezantsi;
Singazinika ezi mpapasho zeTelegram ukuba isihloko kunye nombhali, ukongeza kupapasho oluhambelanayo esinokongeza imifanekiso okanye iividiyo kuzo. Ngelishwa ngalo mzuzu upapasho, lwabiwe, alunakususwa, nangona lunokuhlelwa. Ewe kunjalo, sele kuxeliwe ukuba lo msebenzi mtsha uza kuphucuka kungekudala, ukusinika inkonzo epheleleyo ngakumbi kunye nokukhetha okunomdla.
Ukongeza kwezi ndaba zimbini zibalaseleyo esinokuzifumana kuhlobo olutsha lweTelegram, sinokufumana zonke iindaba esele sizikhankanyile ngaphambili, kunye notshintsho kuyilo, ukulungiswa kweempazamo kunye nokwenza inkonzo isebenze, nto leyo edla ngokubandakanywa kuhlaziyo oluninzi.
Khuphela uhlaziyo ngoku
Izolo emva kwemini iTelegram ibhengeze ngokusesikweni uhlaziyo, oluthe emva kwemizuzu embalwa lwalusele lukhona iyafumaneka kuzo zombini iGoogle Play kunye nakwiVenkile ye App. Ukuba ufuna ukuzama iindaba zenkonzo yemiyalezo ekhawulezileyo, kufuneka ujonge ukuba uhlaziyo olufakelweyo kungenjalo ungene kwisitolo esisemthethweni senkqubo yakho yokusebenza kwaye ufake ingxelo entsha yeTelegram.
Apha ngezantsi sinika amakhonkco ukukhuphela ingxelo entsha yeTelegram. Ewe kunjalo, ayithethi, ukhuphelo lusimahla, ngaphandle kokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Ucinga ntoni ngeendaba ezintsha esizifumana kuhlaziyo lwamva lweTelegram ngoku olukhoyo lokukhutshelwa?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona. Unokusilandela kwakhona ngejelo lethu elisemthethweni leTelegram onokuthi ujoyine kule khonkco ilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Telegram ihlaziywa ngokusungula iiNdwendwe eziKhawulezayo kunye neqonga layo lokubloga
IAmazon ijoyina imeko yosasazo kwezemidlalo
I-OnePlus 3 iya kufumana uhlaziyo ngaphandle kokufika kwe-OnePlus 3T entsha